Mandroaka Sendikalista iray Malaza i Libanona, Mitsapa Ny Fanapahankevitr’ireo Mpiasa Mpifindra Monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2017 15:47 GMT
Sujana Rana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Beirout niatrika ny fanaovana azy. Mikopa-tanana ireo vahoaka mpanohana tonga hanohitra ny fandroahana azy izy. 10 Desambra 2016. Loharano: Facebook.
Mamoritra ireo mpikambana anaty sendika tafiditra amin'ny fikarakarana ny mpiasa mpifindra monina ao amin'ny firenena ireo tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny lalàna any Libanona, ary mahatsapa ny tenany no voaporitra sy tsy manana safidy firy ireo mpiasa mafana fo.
Sujana Rana, Nepaley mpiasa an-trano fanta-daza, mpifindra monina sady mpikambana ao anaty sendikà ao Libanona, dia niasa taminà trano iray tamin'ny 1 Desambra, rehefa tonga ny polisy ary nisambotra azy.
Herinandro tao aorian'izay, nilaza tao amin'ny Facebook ny vondrona “Mpiaro ny Zo maha-Olona ny Vehivavy Any Afovoany Atsinanana sy Avaratr'i Afrika” (WHRD) fa ao anatin'ny roa andro dia halefa sesitany i Rana, ny 11 Desambra amin'ny 12:45 a.m.
Vaovao farany: nilaza ny Fiarovana Ankapobeny Libaney fa tsy maintsy hiainga alohan'ny 12h45 ny Sabotsy ilay sendikalista Sujana.
Taloha kelin'ny nampodiana azy avy any Libanona, nizara ity hafatra manaraka ity tao amin'ny Facebook i Rana:
Aoka ianareo rehetra hiaro tena sy hatanjaka. Hody any amin'ny tanin'ny reniko aho. Misaotra indrindra. Halahelo anareo rehetra aho.
Mandà tsy hanome ny tena anton'ny fisamborana sy fandroahana ireo manampahefana Libaney, nefa maro no niahiahy fa nokendrena i Rana noho ny toerana ambony tazoniny ao anatin'ny Sendikàn'ny Mpiasa an-trano, izay nampiany natsangana.
Dimy andro taorian'ny nisamborana an'i Rana, nanatona an'i Roja “Rosie” Maya Limbu, mpikarakara fanta-daza ny sendikà ireo manampahefana Libaney. Tamin'ny fotoana nanoratana ity, mbola any amin'ny fonjakelin'ny polisy i Limbu.
Na kely aza amin'ny ankapobeny, na tsy misy mihitsy ny fifantohana omen'ireo mpanao politika sy ireo mpampiata vaovao ao Libanona an'ilay olan'ny mpiasa ao amin'ny firenena, nahasarika ny sain'ny maro, ara-pitenenana, ny fisamborana an'i Rana sy Limbu.
Ireo mpanohana tonga niaraka tamin'i Sujana teny amin'ny seranam-piaramanidina nandritra ny fiatrehany ny fandroahana azy. Loharano: Facebook.
Ho valin'ireo toa fitanana am-ponja tsy an-drariny, hoy ny Firaisamben'ny Sendika Arabo:
Samy nanameloka ilay fanapahankevitra fandroahana an'i Sujana Rana sy ny fisamborana “tsy an-drariny” an-dramatoa Rose Limbu daholo, na ny Firaisambe Nasionaly na ny Fihaonambe. Hoy ny fanambaràna:” Hatramin'izao, mbola tsy mazava ny antony nisamborana azy”. Nanampy ny fanambaràna: “tsy navela niresaka tamin'izy ireo akory izahay mba hahafahanay manakarama mpisolovava na farafahakeliny nampahafantarina anay sy ny vahoaka ny vesatra niampangana azy ireo”.
Ny Federasiona Iraisam-pirenenan'ny Mpiasa an-trano koa nanameloka ilay fanapahankevitra:
Malahelo mafy sy tohina noho ny fisamborana tsy ela akory nanjo ireo Nepaley roa mpiasa an-trano tany Libanona – [Sujana] Rana fantatra amin'ny hoe Zogana Rana, sy Roja Maya Limbu fantatra amin'ny hoe Rosie Limbaugh- tsy misy fanazavana matotra sy mazava ny fiampangana azy ireo. […] Melohinay mafy izany karazana fisamborana izany izay mikendry ny hampiraviravy ny sendika sy hampitahotra ny mpikambana ao aminy amin'izao fotoana izao ary izay mety hiditra ho mpikambana
Niantso ny famotsorana avy hatrany ireo vehivavy roa ny fanambaràna tamin'ny 9 Desambra navoakan'ny Hetsika Manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra, nosoniavin'ireo ONG miisa 29, Libaney sy iraisam-pirenena. Arovan'ilay fanambaràna ny hoe manaporofo raharahan'ireo sendikà ny tsy fahampian'ny fiarovana ireo mpiasa an-trano mifindra monina :
Sujana sy Rosie dia mpiaro ny zon'ny mpiasa an-trano ao Libanona, ary niezaka mafy nanaporofo sy nampiharihary ny herisetra ampiharin'ny rafitra fiahiana / Kafala amin'ireo mpiasa an-trano mpifindra monina any Libanona. Mampifandray ny fipetrahana ara-dalanan'ny mpiasa an-trano iray amin'ny mpampiasa iray io rafitra io, izay mifototra amin'ny toromariky ny mpitantana, ary tsy anànany zo ny manova io mpampiasa io raha tsy omen'izy ireo alalana izy. Ankoatra izany, tsy manome fiarovana ny mpiasa an-trano izy na kely aza, satria mazava fa voailika mibaribary amin'ny lalànan'ny asa Libaney izy ireo. Araka izany, lavin'ny rafitra Kafala ny zon'izy ireo hifamezivezy, haka aina, ny karama farany ambany, ary ny ankamaroan'ny zo fototra maha-olona, ary ny tena zava-dehibe dia ny zo hivory sy hanana fikambanana.
Ny raharahan'i Sujana sy Rose androany dia mbola manaporofo indray fa any Libanona dia osa manoloana ny lalàna ireo mpiasa an-trano mpifindra monina satria ny manampahefana sy ny mpampiasa no mifehy manontolo ny hoavin'izy ireo. Mametraka ahiahy ny amin'ny mety mbola ho fisian'ny fepetra fanavakavahana an'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny zon'ny fahafahana hanana fikambanana voalaza ao amin'ny sasin'ny lalàm-panorenana Libaney ny asa nataon'ny Fiarovana Ankabopeny farany teo.
Asongadin'ireo fisamborana ireto mpiasa mpikarakara fanta-daza ireto ny fomba fanaon'ny “Kafala” ao Libanona — rafitra fiahiana izay manafoana ny zon'ny mpiasa an-trano arovan'ny lalàna iraisam-pirenena.
Araka ny lahatsoratra iray nivoaka tamin'ny 2015 tao amin'ny Migrant-Rights.org:
[Ny rafitra Kafala] dia rafitra fanarahamaso. Fomba iray anomezan'ny fitondram-panjakana andraikitra faharahamaso ny mpila ravin'ahitra ho an'olom-pirenena tsotra na orinasa tsy miankina, raha resaka fifindramoninano raisina. Omen'ilay rafitra kazarana fahafahana araka ny lalàna hifehy ny mpiasa ireo mpiahy: raha tsy misy fanomezandàlan'ny mpampiasa azy, tsy afaka miova asa ny mpiasa, tsy afaka miala amin'ny asany, na miala ny firenena. Raha misy mpiasa mila amin'ny asany nefa tsy nahazo fahazoandàlana, manana fahefana hanafoana ny fahafahany mipetraka ao amin ‘ny firenena (visa) ny mpampiasa, manova avy hatrany ny satan’ ilay mpiasa ho mponina tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena. Ireo mpiasa izay nofoanan'ny mpampiasa ny fahazoany mipetraka dia tsy maintsy mandao ny firenena amin'ny alalan'ny fandroahana, ary maro no tsy maintsy mandalo fonja.
Nilaza tamin'ny Global Voices i Farah Salka, tale mpanatanteraka ny Hetsika Manohitra ny Fanavakavaham-bolonkoditra, fa miankina amin'izay manjò an'i Rana sy Limbu ny hoavin'ireo mafana fo mpifindra monina:
Mila ovaintsika ny zavatra natao tamin'i Sujana sy Rose. Raha tsy afahantsika i Rose ary tohanan-tsika ny fiverenan'i Sujana haingana hiasa eto Libanona, dia ho toy ny kapoka mivantana amin'ny sain'ireo mafana fo mpifindra monina izany, fa indrindra ireo mpiaro ny zon'ny mpiasa an-trano eto. Raha afaka mandositra toe-javatra tahàka izany ny Fiarovana Ankapobeny Libaney, manome tsiny sy manasazy vehivavy noho ny fahazotoany sy ny fanohanany ary ny fitsanganany hiray hina amin'ireo mpiasa an-trano tra-pahasahiranana eto, dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny ezaka rehetra mba hanohana ny zon'ny mpiasa mpifindra monina eto amin'ity firenena ity izany. Amin'ny ankapobeny, hanaparitaka tahotra amin'ny maro, hanakivy ny eritreritry ny mpiasa amin'ny resaka hafanampo ary hamerina ny tolona sy ny asa mafy hiverina any amin'ny teboka niandohana izany.
Mandritra izany, miasa ho an'ny famotsorana tsy misy hatak'andro an'i Roja ireo Libaney mafana fo :